Tetikasa Padap – Marovoay: vahaolana voalohany ny fanadiovana ny lakandrano - ewa.mg
News - Tetikasa Padap – Marovoay: vahaolana voalohany ny fanadiovana ny lakandrano
Manajary ny lakandrano any Marovoay
ny tetikasa Padap* amin’izao fotoana izao ho famerenana ny lazany
amin’ny maha sompitr’i Madagasikara azy. 70 % avy amin’ny Banky
iraisam-pirenena, 30 % avy amin’ny AFD ny vola hoentina amin’izany
asa fanajariana izany. Tanjona nananganana ny Padap tamin’ny taona
2017, ny hampitombo ny vokatra. Ho an’i Marovoay, vahaolana
voalohany ny fanadiovana ny fivoahan’ny rano sy ny lakandrano
Taona maro tsy nisy fikojakojana ny
lemaka anarivony hekitara, hany ka tanimbary maro no maty, satria
tototry ny fasika ireo lakandrano.
Ny dimy taona ho avy amin’ity
tetikasa ity ny fiantohana tsy tapaka ny fampandehanana ny rano
manondraka tanimbary. Hamafisina amin’ny lafiny teknika izany
fanondrahana tanimbary izany, hataon’ireo mpamboly any an-toerana.
Ny tontolon’ny fambolena nozahana no antony nisafidiana an’i
Marovoay noho ny fisian’ny velaran-tanimbary midadasika
tokony ho voatondraka ka hampitombo ny voka-bary sy ny fidiram-bola
ho an’ireo tantsaha. Antoky ny fampandrosoana ny toekarena
maharitra miainga avy amin’ny fambolena.
Anisan’ny mahazo fanohanana avy
amin’ity tetikasa ity ny vondrom-bahoaka intsinjaram-pahefana, raha
manana fandaharanasa fanajariana sy fitantanan-drano. Zahana ihany
koa ny fananan-tany, ny fitandroana ny ala miaraka amin’ny
zavaboary manodidina ho fiarovana ny farihin’Ambaromalandy
tsy ho ritra.
Matoky ny fanarenana izao
fotodrafitrasa izao ireo mponina any amin’ireo kaominina
ambanivohitra rehetra ao amin’ny distrikan’i Marovoay, hiadiana
amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Miasa manadio ny lakandrano
amin’izao fotoana izao ireo trakitera sy fitaovana vaventy
karamain’ny tetikasa Padap. Nijery ny fizotran’ny asa ny
governoran’i Boeny, Andriatomanga Moktar Salim.
Padap* : Projet d’agriculture durable par une approche
L’article Tetikasa Padap – Marovoay: vahaolana voalohany ny fanadiovana ny lakandrano a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 16/11/2020
Toamasina: misy mitady hanaparitaka lafarinina lo indray
Nanao fisavana any amin’ny tranombarotra iray eny Tanambao V eto Toamasina ny mpiasan’ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana, miisa dimy, avy any Antananarivo, ny herinandro lasa teo. Tratra tao ny kaontenera miisa efatra, nahitana lafarinina efa simba sy lo. Fantatra fa tsy vitan’ny tompony ara-potoana ny fikarakarana antontan-taratasy famoahana ireo entana ireo any amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ka nahatonga izao fahasimbana izao.Manampy izany, mitaky ny hamerenana ny fananany ny orinasa tompon’ireo kaontenera efatra ka tsy maintsy nesorina ireo lafarinina, natoby ao amin’ny trano fitahirizana entana an’ilay tranombarotra. Voalaza fa tsy nisy ny fanagiazana nataon’ireo mpiasan’ny minisitera, fa nohidina tamin’ny gadana fotsiny ny magazay. Miahiahy ny maro fa sao misy ny tsikomba na kolikoly amin’ity raharaha ity, ary misy ny milaza fa efa nentina niakatra any Antananarivo ny ampahany sasany amin’ireo lafarinina simba ireo, nihazo ny lalam-pirenena faharoa (RN 2). Andrasana ny fanadihadiana lalina ataon’ny tompon’andraikitra.Sajo L’article Toamasina: misy mitady hanaparitaka lafarinina lo indray a été récupéré chez Newsmada.
Tantara « Henjan-droa »: hisokatra ny alahady izao ny taona teatraly 2021
Tsy nisy ny taona teatraly tamin’ny taon-dasa. Ilay tantara saika hanokafana izany ihany no haroson’ny FMTM hanokatra ny “Taona teatraly 2021”.Miezaka mampiaina hatrany ny teatra malagasy ireo mpisehatra. Fantatra fa hosokafana ny alahady 7 marsa izao ny “Taona teatraly 2021”, araka ny fanambarana avy amin’ny fikambanan’ny mpanao teatra malagasy na ny FMTM. Ilay tantara “Henjan-droa” no hovelomina indray etsy amin’ny Alliance française Andavamamba, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Tantara nosoratan’i Wast Ravelomoria izy ity, narindran-dRavaloson Haja sy i Noely Randriatsitohaina. Mpisehatra nofidina avy amin’ireo tropy mpikambana ao amin’ny FMTM kosa ny hampiaina izany. Raha fintinina, mahakasika ny fifandonana eo amin’ny mpivady ny lohahevitry ny tantara “Henjan-droa”. Misy fizarana telo izany. Tsy matetika nolalaovina izy ity ka antony nisafidianana azy hanokafana ny taona teatraly izany. Tsiahivina koa fa tokony ho nanokatra ny “Taona teatraly 2020” izy io, saingy voatery najanona noho ny fisian’ny hamehana ara-pahasalamana tamin’ireny. Mandra-piandry ny tohin’ny fandaharam-potoana, efa miatrika koa ny fanomanana ny andro eran-tany ho an’ny teatra, hankalazaina ny 27 marsa ho avy izao, ny FMTM. Sarotsarotra ny fanomanana ny fiakarana an-tsehatra ho azy ireo, indrindra noho ny tsy fisian’ny fotodrafitrasa afaka mandray ny teatra, saingy miezaka hatrany mampiaina ity seha-kanto ity ireo mpisehatra.Zo ny AinaL’article Tantara « Henjan-droa »: hisokatra ny alahady izao ny taona teatraly 2021 a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – «Can 2019»: hiatrika lalao firahalahiana telo ny Barea
Araka ny vaovao hita ao amin’ny tambajotran-tseraseran’ny kaonfederasiona afrikanina baolina kitra (Caf), nivoaka, omaly talata 23 avrily, hisy lalao firahalahiana telo hataon’ny Barea de Madagascar, mialoha ny hiatrehany ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”, hotanterahina any Egypta, afaka roa volana.Hisy fampivondronana intelo ihany koa ho an’ny ekipam-pirenena malagasy, manomboka ny 31 mey ho avy izao. Hanombohany izany ny ao Frantsa, toerana izay hisian’ny ankamaroan’ireo mpilalao mandrafitra ny Barea de Madagascar. Avy eo, miampita any Luxembourg ny Barea, hiatrika ny fihaonana voalohany, hatao ny alahady 2 jona 2019. Hiverina ao Frantsa indray ny ekipam-pirenena malagasy aorian’izay, hikatroka amin’i Kenya, ny zoma 7 jona.Hitodi-doha eto Madagasikara ny Barea, rehefa vita io lalao amin’i Kenya io, ka hanoman-tena herinandro eto an-tanindrazana. Fotoana ihany koa hahafahan’ny mpijery mahita maso sy manatrika ny fanazarantenany.Hizatra toe-tanyNoho ny hafanana misy any Egypta, amin’io fotoan’ny “Can 2019” io, handalo ary hijanona telo na efatra andro ao Maraoka, hizatra toe-tany, izay mitovy amin’ny any Egypta, ny Barea de Madagascar, mialoha ny handehanany hiatrika ny fifaninanana.Araka ny fandaharam-potoana, hisy lalao sedra fahatelo hatrehin’ny Barea de Madagascar, hikatrohany amin’i Maoritania. Io firenena io izay sambany ihany koa hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika toa an’i Madagasikara.Nambaran’i Atallah Beatrice, filohan’ny “comité de normalisation”, fa misy fianakaviana malagasy vonona hanome maimaimpoana fiara fitaterana hampiasain’ny Barea de Madagascar, mandritra ny fanomanantenany, ao Frantsa.Ho feno tanteraka izany ny fandaharam-potoan’ny Barea de Madagascar, amin’ny fanomanana ity “Can 2019” ity. TompondakaL’article Kitra – «Can 2019»: hiatrika lalao firahalahiana telo ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Fanandratana ny kolontsaina: nisarika ny maro hifantoka any Androy ny “Mbetoa heke”
Manankarena kolontsaina i Androy. Ampahany ihany no aseho mandritra ny hetsika “MBetoa heke”, kanefa mahasarika ny maro hitodika any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy. “Mbetoa heke”, na hoe “Mba aty in­dray izao”. Tsy ny maso sy ny sofina iha­ny no nantsoina hifantoka fa vo­asarika ho any amin’ny faritra Androy avokoa ny fa­nahin’ireo nanatrika ny fanokafana ny hetsika “Mbeto heke”, omaly, tetsy amin’ny tokotanin’ny ORTM Anosy. Ahi­tana tranoheva maro, azon’ ny besinimaro tsidihina, ha­tramin’ny anio. Hetsika iray natao hanasongadinana sy hampahafantarana ny kolon­tsaina, ny fomba amam-panao ary ny zavakanto avy any An­droy izy ity. Novolavolain’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina ary ny fikambanana Sairy, izay ivondronan’ireo mpanakanto avy any Androy ny hetsika. “Isan’ireo mitondra avo ny kolontsaina malagasy eto sy any ivelany ny Antandroy. Olon’ny fihavanana ihany koa ary misy azy manerana ny No­sy”, hoy ny kestora voaloh­an’ny Antenimierampirenana, i Henri Jean Michel. Nana­ma­fy ity solombavambahoaka voafidy tao Ambovombe An­droy ity fa zava-dehibe ny he­tsika, hanairana ny hambompon’ny Antandroy tsy hitanondrika manolona ny fisian’ ny “kere”. Fanombohana iha­ny izy ity fa hitohy ny fampahafantarana ny kolontsaina avy amin’ny faritra hafa”, hoy ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatiana, nikabary tamin’ny fiteny malagasy avy any Androy. Mifan­dimby manafana ny sehatra kosa ireo mpanakanto avy any Androy toa an-dry Salala, Nainako, Masabao, Talike, Akalo, Vilon’Androy, Rapo Atlas, Varanga, sns.Zo ny AinaL’article Fanandratana ny kolontsaina: nisarika ny maro hifantoka any Androy ny “Mbetoa heke” a été récupéré chez Newsmada.
Faharendrehana amin’ny kolikoly
Satry tokoa ny hino. Satry dia satry saingy tsy hinohino fahatany fa sady mahita ihany koa ny asa mivaingana amin’ny famongorana ny kolikoly eto Madagasikara. Tafapetraka tamin’ny herinandro lasa iny ny tale jeneralin’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco). Saro-piterahana ny fivoahan’ny anaran’ny tale jeneraly vaovao. Enga anie ka ny safidy mba hahazoana vokatra tsaratsara kokoa noho ny teo aloha nefa haingana lavitra no mety ho anton’ny fitarazohan’ny fanendrena. Raha atao indray mijery dia nandroso isika tamin’ny ezaka iadiana amin’ny kolikoly, raha tsy hilaza afa-tsy ny fitsanganan’ireo rantsam-pitsarana manokana miady amin’ny kolikoly. Nahenoana anarana manampahefana sy tompon’andraiki-panjakana ambony ihany tao anatin’ireo voarohirohy noho ny raharaha fanenjahana samihafa. Mbola betsaka kosa ireo anarana mipoapoaka sy nalaza teto amin’ny firenena no miriaria any, na eto na tsy eto an-tanindrazana intsony. Zary miandry ny ohatra miainga avy any ambony, na koa hoe mitady an’ilay fahazarana manenjika sady manafay an’ireo “tsimatimanota” aloha ny ankamaroan-dRamalagasy. Indraindray mantsy toa ataony fitaovana ihodivirana amin’ny fialana amin’io fahalovana io ny fahafantarany fa misy an-dRakoto sy Rabe, nitazona an’izao toerana izao sy izao, tena raindahiny tamin’ireo endrika kolikoly teto amin’ny firenena, saingy vitavita ho azy. Natao enjikenjika fotsiny ny fametrahana an’ilay Fitsarana manokana an’ireo olona ambony (HCJ), indrindra fa nihantona tamin’ny fiandrasana ny fifidianana solombavambahoaka farany teo ny raharaha mila tohizana mahakasika sokajin’olona efa nanana andraikitra lehibe teto Madagasikara. Finiavana politika fa tsy kajikajy politika no tokony hibaiko amin’ny famaranana an’ireny raharaha samihafa ireny, na iza na avy aiza ary na inona ilay olona voarohirohy. Mba tsy ho eo imolotra fotsiny, na ho fialana balan’ireo olom-pirenena an-tapitrisany amin’ny hanohizany ny fomba ratsy, ny fanenjehana an’ireo “trondro vaventy”. Rehefa tena vaindohan-draharaha tokoa ny ady amin’ny kolikoly dia aoka samy hiaiky fa ao anatina farihy iray ilomanosana miaraka amin’ny fahalovana no misy antsika mianakavy. Mila foanana ilay fomba famaritana ny trondro madinika sy lehibe rehefa manao kolikoly. Tsy maintsy manafay ny rehetra ny haran-jono sy ny lelam-pitana, na iza na iza. Sao ny vola haloa amin’ny “tsolotra” fotsiny no mitombo, na hihoapampana mihitsy aza, fa ilay ady amin’ny kolikoly ho tahaka ny lovian-tsahona ihany… L’article Faharendrehana amin’ny kolikoly est apparu en premier sur AoRaha.
Basikety-Mada Vétéran: nandresy ny ASTAR ny BCEST
Hiditra amin’ny andro fahadimy, anio, ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara, sokajy Vétéran, ho an’ny taranja basikety. Fifaninanana izay tanterahina any Toliara, nanomboka ny faran’ny herinandro teo, hahitana ekipa miisa 47, 32 lehilahy ary 15 vehivavy. Isan’ny lalao nisongadina, omaly, ny fihaonana teo amin’ny sokajy lehilahy, nifandonan’ny ekipan’ny BCEST sy ny ASTAR. Nivoaka mpandresy tamin’ny isa 57 no ho 38, tamin’izany ny ekipan’Atsimo Andrefana, ny BCEST. Eo amin’izay valin-dalao izay hatrany, fihaonana isan’ny niady, ny teo amin’ny BBCM sy SMBC, sokajy lehilahy, izay isa 3 monja ny elanelana teo amin’ny roa tonta (54-51), ka ny SMBC ny nivoaka mpandresy.Mifanindry an-dalana amin’ity fifaninanana ho an’ny Vétéran ity ihany koa ny fiadiana ny tompondaka nasionaly ho an’ny sokajy U16 lahy sy vavy. Lalao niavaka ny teo amin’ny MB2ALL sy ny BCII04, izay nahitana elanelan’isa goavana (110-04). Mi.RazL’article Basikety-Mada Vétéran: nandresy ny ASTAR ny BCEST a été récupéré chez Newsmada.